Global Voices teny Malagasy » Fanantenana Hisian’ny Frantsa Miray Rehefa Nandalo Fankahalàna Sy Tahotra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Desambra 2015 8:39 GMT 1	 · Mpanoratra Alix Barre Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Andrefana, Frantsa, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Tsara
Araben'i Parisy, avy amin'i Pixabay -Sehatra ho an'ny daholobe
Telo herinandro taorian'ireo andianà fanafihana voarindra  nahafatesana olona 130, mba manao ahoana i Parisy amin'izao fotoana izao? Nanamafy tokoa ny fiarovana ny renivohitra ireo manampahefana ary nanomboka ny famoretana ireo ahiahiana ho mety mbola miketrika herisetra misimisy kokoa amin'ny anaran'ilay vondrona milisy mahery fihetsika ISIS (fantatra koa amin'ny hoe Daesh), izay nilaza ho tomponantoka tamin'ilay fandatsahan-drà. Tena niova tanteraka mihitsy ny rivotra iainana tao amin'ilay tanànan'ny hazavàna, saingy ezahan'ireo olompirenena ao ny hiala amin'ireo fanafihana lasa ireo ary hizotra hiaina amin'ny fiainany andavanandro.
Ao anatin'ny tahotra, mety hisy vovoka fanantenana hisian'ny Frantsa miray bebe kokoa ve ?
Ao Frantsa, misy zavatra roa mampiasa loha nipoitra taorian'ireo fanafihana: 1. Hisedra fanavakavahana ve ny vondrom-piarahamonin'ny Miozolmana noho ireny fihetsika feno herisetra lazain'ireo vondrona mpanao an-tendrony ho nataony amin'ny anaran'ny Silamo ireny, na dia nanameloka izany fotokevitra naolana izany ho tsy mifanaraka amin'ny maha-Silamo aza ireo Miozolmana ao Frantsa sy manerana ny tany?, 2. Hampakatra ny lazan'ny antokon'ny elatra farany havanana ve io, ny Front National (FN), raha afaka roa taona latsaka sisa dia hatao ny fifidianana ho filoham-pirenena?
Efa miha-hita soritra ity farany ity, miaraka amin'ireo fitsapankevitra farany izay manome tombony an'i Marine Le Pen, filohan'ny Front National, ho tafita amin'ny fihodinana faharoa. Mety ho io no fotona faharoa hahavitan'ny antoko farany havanana hiakatra amin'ny fihodinana faharoa; Jean-Marie Le Pen rainy no nahavita izany farany tamin'ny 2002.
Fa na eo kosa aza ireny fiantraikany ratsy ireny, misy ihany koa ny fahafahan'i Frantsa miray bebe kokoa. Marobe ireo tenifototra nironana taorian'ireo vono olona; iray tamin'ireny aza ny #Nousommesunis (Mitambatra isika) izay nanana ny tranonkalany  manokana sy pejy Facebook. Nahasarika kokoa ny saina izy io, miohatra amin'ilay tenifototra #terrorisme (fampihorohoroana) izay maneho fa mitodika kokoa amin'ny fiaraha-mijoro ny fifantohan'ireo olompirenena ao Parisy. Olona iray mpampiasa Twitter nanamarika hoe:
Ny tenifototra #nousommesunis eo anoloan'ny tenifototra #terrorisme. Satria, eny, miray manohitra ny fampihorohoroana isika. (Manambara ny saripika ao amin'ny Twitter hoe mirona mankany amin'ny fahazoana bitsika 11.6 K ny tenifototra #nousommesunis tamin'ny 13 Novambra raha ny tenifototra #terrorisme kosa no manarakaraka azy eo)
Tamin'ny fampiasàna ilay tenifototra, nandefa lahatsary iray tao amin'ny Youtube ireo Miozolmana mpianatra ao Frantsa, mba hanehoan-dry zareo ny fihetsehampony taorian'ireo fanafihana. Ao anatin'ilay lahatsary, tazonin'ireo mpianatra vitsivitsy ny takelaka misy ny soratra hoe #nousommesunis, raha ilay mpitantara kosa maneho ny fanohanany ny firaisana manoloana ny fahasamihafàna. Mifarana amin'ny hoe: “Ny tsirairay ho an'ny rehetra ary ny rehetra ho an'ny zanak'Olombelona, miray ary hiray mandrakizay isika” avy hatrany taorian'ny nampisehoana andàlana iray avy ao amin'ny Korany:
Tenifototra iray nironana ny hoe #pasenmonnom (Tsy Amin'ny Anarako), nampiasain'ireo Frantsay Miozolmana mba hanamafisany hoe mifanohitra amin'ny finoan-dry zareo io herisetra feno habibiana io. Miaraka amin'ireo fanafihana hafa nataon'ireo mahery fihetsika, nanantena fialantsiny avy amin'ireo Miozolmana ny sasany, na dia tsy misy idiran-dry zareo aza izy ireny — fenitra iray tsy noterena ho arahan'ireo hafa finoana izay tsy isalasalàna fa miteraka fisamantsamahana bebe kokoa. Izany eo ihany, niteny tety anaty media sosialy ry zareo Miozolmana mba hiaro ny finoany izay voapentina ary koa fanehoany ny firaisankinany.
Biby 8 no nanatontosa ireny fanafihana ireny, tsy mahasolo tena ahy, manapentina ny finoako sy ny sariko! #TsyAminAnarako
Fanafihana na raha ny marina vono olona tao #paris, avy amin'ny kolontsaina Miozolmana aho ary lazaiko fa #TsyAminAnarako. Avereno bitsihana azafady.
Fomba iray hafa no nataon'ny lehilahy Miozolmana iray hafa, nidina teny amin'ny Kianjan'ny Repoblika ao Parisy izy ary nametaka tampina tamin'ny masony. Teo akaikiny teo nisy takelaka roa, nisy soratra toy izao ny iray,”Miozolmana aho saingy lazain-dry zareo fa mpampihorohoro”, ary ny faharoa, “Izaho matoky anao, ary ianao ve matoky ahy?”
Indrisy, mbola misy hatrany ireo hetsika fankahalàna atao amin'ireo Miozolmana ao Frantsa taorian'ireo fanafihana, na teo aza ireo fihetsehampo mahavaky fo hisian'ny firaisana izay nankalazaina tety ivelany sy tany anatin'ny serasera. Fotoana iray fanararaotra io ho an'i Fratsa mba hijoroana miara-manohitra ny fahavalo iombonana : manaparitaka tahotra sy fankahalàna ny Daesh, tsy amin'ny alàlan'ny fanafihana fotsiny fa miaraka amin'ny fampiasàna media sosialy saro-takarina. Raha toa ka ny hijoro matanjaka, hitambatra no valinkafatra asetry ireo famoizana, dia ho resy ry zareo.
Sady izao koa, misy fomba fitenin'ny Frantsay mahalaza azy manao hoe: “Tsy ho tonga eny amin'ny voromailala fotsy akory ny roran'androngo”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/12/03/77310/
 taorian'ireo andianà fanafihana voarindra: https://globalvoices.org/2015/11/14/the-best-of-paris-shines-through-during-its-worst-of-times/
 fanantenana hisian'ny Frantsa miray bebe kokoa ve: https://globalvoices.org/2015/11/15/for-it-to-be-unity-it-cant-be-partial-paris-attacks/